I-Semalt ichaza isizathu sokuba Ufanele usebenzise iBlogging kwiSicwangciso sakho seNtengiso se-SEO
Kukho iindlela ezininzi abantu abazisebenzisayo ukubhubhisa ubukho obuphezulu kwi-intanethi. Kwiintlobo ezininzi, ukuthengiswa kwe-digital kwakha i-chassis yamaphulo onke okuthengisa. Iinkampani ezininzi zinokuzuza ngokusekwa kwewebhusayithi ephumeleleyo kwaye kuqinisekiswe ukuba kukho ukuhamba ngokukhawuleza kwabaxumi. Kwabaninzi abathengisi bedijithali, i-Search Engine Optimisation yisoloko yindlela efanelekileyo yokuphumeza le nkqubo - تنظيف واجهات الحجر بالطائف. Eli qhinga lingenza iwebsite ibe nobukho obuxhomekeke kwi-intanethi kwiindwendwe zayo kunye neqonga elifanelekileyo lokuphumeza inkonzo enkulu ye-SEO .
Ukubhanqa kuyinkqubo enokukunceda inkampani igcine ubudlelwane obukhawulezileyo kunye ngokukhawuleza kunye nabaxumi abaninzi. Ungasebenzisa iblologi uze uvele kwezinye zezona ndawo ezinzima kakhulu kwiwebhu. Kwiimeko ezininzi, iiblogi zinokwenza ukuba umxholo wakho uphakamileyo kwiSERPs. Nangona kunjalo, akuyena wonke umntu owaziyo ukusebenzisa iblogi ngokufanelekileyo. Ezinye zeenkonzo zengingqi ze-SEO ezingenza ukuba ibhulogi yakho iphumelele kule khokhelo enikezwe nguJulia Vashneva, umphathi weMatriki oPhumeleleyo we-14 (Semalt IiNkonzo zeDivarti:
1. Sebenzisa amagama angundoqo kunye neengqungquthela ukubandakanya intengiso yakho. Kuyo yonke inkqubo yokuthengisa ngokuphumelelayo, amagama asemgangathweni akha isiseko esiqinileyo sokuba khona kwi-intanethi. Yiyo eyona nto iphenyo ekuphambili kwikhonsoli yokukhangela kwindawo yokuqala..Ukuqhuba uphendlo lwegama eliphambili lenza ukuba iiwebhusayithi ze-SEO zendawo zenzeke ngokukhawuleza, ukwenza yonke inkqubo iphumelele. La magama angundoqo kufuneka abekho kwiindawo eziphambili zeso siza ukwenzela ukuba iinkonzo ze-SEO zendawo ziphakame ireyini yakho.
2. Sebenzisa amagama asekuhlaleni. Kubalulekile ukubandakanya amagama asekuhlaleni kwiindawo ze-SEO zendawo. Lo mbandela unokwenza injini yosesho njenge-Google ukuhlunga i-traffic yakho kwikhonsoli yabo ye-Google Analytics. Amagama omzi kunye nomakhelwane kufuneka avele kumxholo wakho kunye neendawo eziphambili njengeemephu zeGoogle xa usebenzisa enye. Uninzi lwamaphando asekuhlaleni ludibanisa la magama ngamagama angundoqo, okwenza yonke inkqubo isebenze ngokwakho.
3. Faka iziganeko zengingqi nemiba. Ukuze iinkonzo zakho ze-SEO zendawo zikhangeleke ngokusemthethweni, kufuneka zixoxe ngendawo ohlala kuyo. Ngokomzekelo, ungasebenzisa imicimbi yengingqi njengemibhiyozo yonyaka, okanye udibanise neminye imiba echaphazela indawo ethile yendawo kwindawo yakho. Ukusetyenziselwa indawo ngokusebenzisa amagama anjalo kunokwenza impembelelo enkulu endleleni abantu abajonga ngayo ukucofa iqhagamshelo kwiwebhusayithi yakho.
4. Yibamba iblogi kwi-domain yakho yeshishini. Ibhulogi yakho kufuneka inike i juyisi yekhonkco kwi-domain yakho, ukwandisa ukufaneleka kwabantu ababandakanya kuyo. Ngokomzekelo, ibhlogi iqulethe ulwazi oluchanekileyo olufanelekileyo kubaphulaphuli.
Ukuphuculwa kweeNjini zoKhenketho kunceda abantu abaninzi ukuba benze imali eyaneleyo. Abashishini bangasebenzisa ukusetyenziswa kweeblogi ukwenza ezinye zazo zeendlela zokucwangcisa injini ezisisiseko. Kunokwenzeka ukwenza iinkonzo zendawo ze-SEO ziphumelele kwimigudu yazo kunye nokusebenzisa iblolo ukukhuthaza le mpawu. Iiblogi ziyiwebhusayithi nganye eyenza ukubandakanya kwabaphulaphuli kunye nokunika iqonga lokungenisa ulwazi olufanelekileyo. Ungayisebenzisa le khokelo ukwenza iblogi ephumeleleyo kwaye wenze inzuzo enkulu kwi-intanethi.